ओली-प्रचण्डले शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दिए यस्तो पद, नेकपा नेता कार्यकर्ता दंग — Sanchar Kendra
ओली-प्रचण्डले शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दिए यस्तो पद, नेकपा नेता कार्यकर्ता दंग
काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्लेयक्ष केपी ओली र प्रचण्डले सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन् । मंगलबार बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।
तत्कालीन उपसभामुख रहेकी तुम्बाहाङफेले गत गत माघ ६ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । तुम्बाहाङफे केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएसँगै उनलाई आजबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ । उनी तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय सदस्य थिइन् । उपसभामुख बनेपछि पार्टीको सदस्यता त्यागेकी थिइन् ।
नेकपा केन्द्रीय समिति बैठक बुधबार बिहान ११ बजे सुरु हुँदैछ । यही केन्द्रीय समिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा तुम्बाहाङ्फेलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएको हो । केन्द्रीय सदस्य बनेपछि आजको बैठकमा सहभागी हुन तुम्बाहाङ्फेलाई बाटो खुलेको छ । उपसभामुख बनेपछि दलीय आबद्धता त्याग्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप उनले पार्टीको सदस्यता त्यागेकी थिइन् ।
गत असोजमा सभामुख रिक्त भएपछि त्यसकाे पूर्तिका लागि उनले नेकपाकै आग्रह अनुसार पदबाट राजीनामा गरेकी थिइन् । पार्टी आग्रहअनुसार राजीनामा गरेकी तुम्बाहाङ्फेले पुनः सक्रिय राजनीतिमा आउने इच्छा व्यक्त गरेपछि नेकपाले उनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको हो ।
यसैबीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । बैठकको अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष द्वय केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन मन्तब्य राखे ।
उक्त उद्घाटन मन्तब्यमा ओलीले सत्तादेखि सडकसम्मका कुरा गरे । त्यसक्रममा उनले वैचारिक पूर्वाग्रह साँधेर पार्टी र सरकारविरुद्ध डरलाग्दो गरि प्रचार युद्ध छेडिएको आरोप लगाए । सरकारले राम्रा राम्रा काम मात्रै गरेको भनेर सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई रिझाउन कोसिस गरे । करिब २ बर्षपछि बसेको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मकरुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
बैठकअघि ओलीले मंगलबार अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग दिनभरजसो छलफल गरेका थिए । केन्द्रीय कमिटीको बैठकका एजेण्डा तयार पार्न मंगलबार साँझ बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले माग गरे – भोलि मैले राष्ट्रिय सभागृहमा एमसीसी र यती लगायतका विषयमा बोल्न पाउनुपर्‍यो । सरकारको बचाउमा बोल्न पाउनुपर्‍यो ।
सचिवालयले प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा लामो भाषण गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, सचिवालयकै नेताहरु एकमत हुन नसकिरहेका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले गरेको जिरहबाट केन्द्रीय सदस्यहरु ‘कन्भिन्स’ भए या भएनन् ? यसको टुंगो बैठकमा अब बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरुको धारणाबाट लाग्ने नै छ ।
पछिल्लो समय नेकपाभित्र पनि ठूला नेतासँग कार्यकर्ताहरु डराउने, अनि कार्यकर्तासँग नेताहरु डराउने मनोविज्ञान विकसित हुन थालेको संकेत बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा देखिएको हो । नेकपाभित्र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली चित्त नबुझे पनि बोल्न सक्ने हिम्मतिला नेता– कार्यकर्ताको खडेरी छ ।
अधिकांश कार्यकर्ताहरु शीर्ष नेतृत्वको आलोचना गर्न डराउँछन् । तर, बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीको सम्वोधन सुन्दा उनीसमेत आफ्नै केन्द्रीय सदस्यहरुसँग डराइरहेको प्रतीत हुन्थ्यो । बैठकमा उपस्थित केन्द्रीय नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मेरो सम्बन्धमा कुनै आलोचना छ, सुझाव छ, टिप्पणी छ भने त्यो पनि कुरा गर्न सकिन्छ । र, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ ।’
तर, त्यसरी आलोचना गर्दा ‘आन्दोलनलाई नोक्सान पर्न नहुने’ ओलीले सुझाए । उनले भने, ‘त्यस प्रकारका वैयक्तिक असन्तुष्टिहरु या आक्रोशहरु या विरोधहरुले आन्दोलनमा प्रभावित गर्ने गरी जानु वाञ्छनीय हुँदैन । म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– हाम्रो सफलता हाम्रो युनिटीमा छ ।’
विगतमा उखान टुक्कासहित प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री ओली बुधबार भने अलि त्रसितजस्तै देखिन्थे । सम्वोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘म कमरेडहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सानातिना कुराहरुमा अल्झिनुहुँदैन । सानातिना कुराहरु केही छन् भने… हुन सक्छ, हामीयता (अगाडि) बस्नेहरुको आलोचना होला, त्यो ठूलो कुरो होइन, हामी सुन्न तयार छौं ।’
ओलीले गरे यती र एमसीसीको बचाऊ
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी मिलेनियम कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई किन पारित गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा लामो तर्क प्रस्तुत गरे । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेको ‘भर्बेटिम मसँग छ’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वकिलको पारामा प्रस्तुत गरे । पूर्वमाओवादीहरुलाई जवाफ दिने अर्थमा उनले महरा पनि एमसीसीमा सहमत थिए भन्ने जिकिर प्रस्तुत गरेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘हामीसँग सही नीतिहरु छन् । हामीसँग विशाल पार्टी छ । जनताले विश्वास गरेर यत्रो समर्थन दिएका छन् । हामीसँग काम गर्ने मौका छ, अवसर छ । हामीसँग समय पनि छ । दुई वर्षका कामहरुले हामी काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरा देखाएको छ । अलिकति हामीले प्रचारमा ध्यान दिन सकेका छैनौं । अलिकति एक ताल, एक सुर भएर हिँड्न सकेका छैनौं, अलिकति एक आवाजमा बोल्न सकेका छैनौं । त्यसका पछाडि केही कमीहरु होलान्, ती कमीहरुलाई हटाऔं र एक आवाजमा बोलौं । एक तालमा चलौं । कदमहरु हाम्रा उस्तै होउन् । त्यसो गर्‍यौं भने हामीले देश बनाउन सक्छौं ।’
नेकपानिकट स्रोतका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकसँग प्रधानमन्त्री ओली डराउनुका पछाडि मुख्यतः तीनवटा कारण छन् – पहिलो कारण – केन्द्रीय समितिले यती लगायतका विषयसँग जोडेर सरकारको कडा आलोचना गर्ने सम्भावना । दोस्रो कारण – सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत आफ्नो गुट अल्पमतमा पर्नु । अनि तेस्रो कारण– संसदबाट एमसीसी पारित गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीले म्यान्डेट नदेला कि भन्ने सशंय ।
ओलीले आफ्ना कतिपय काममा एमालेजस्तो भइएको स्वीकार गरेका छन् । अब राष्ट्र निर्माणको मूल्यमा त्यसलाई बिर्सदै जानुपर्ने नेकपा अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु भएको नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘कहिले–कहिले बोल्दाखेरि मैले नेकपा नभनेर एमाले भनिराख्या हुन्छु । पृष्ठभूमिले तानेको । बोल्ने बानी परेको, बोल्दै जाँदाखेरि फ्याट्ट एमाले भनिन्छ, अनि सम्झिँदाखेरि त ए हामी त नेकपा भइसकियो !’
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘डेढ वर्ष भइसक्यो नेकपा भाको, एमाले भन्ने घरिघरि आउँछ, त्यो पृष्ठभूमिले हो ।’ एमाले भन्ने बोलाइमा मात्र नभएर कहिलेकाहीँ काममा समेत देखिने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरे । बैठकको सुरुमा लामो सम्वोधन गरेका अध्यक्ष ओलीले भने, ‘त्यो (एमाले) बोलाइमा मात्रै होइन, कहिले–कहिले काममा पनि त्यस्ता आउलान् । तर, त्यसलाई अब हामीले राष्ट्र निर्माणको कस्टमा चाहिँ छोड्दै जानुपर्छ । त्यसलाई बिर्सँदै जानुपर्छ र हामीले फराकिलो भावनाका साथ एकतावद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ ।’
एकता प्रक्रियालाई टुंग्याउने कुरामा अलिकति विलम्ब भएको स्वीकार गर्दै प्रधानान्त्री ओलीले यसमा नेतृत्व गम्भीर रहेको बताए । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको पृष्ठभूमि अहिलकति समयसम्म जान सक्ने उनले विश्लेषण गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अलिकति समयसम्म यो पृष्ठभूमिले अलिअलि तान्छ ।
त्यस क्रममा सरकारले केही गरेन भन्ने हल्ला निराधार भएको दावी गर्दै विश्वका कुनै पनि सूचकमा नेपालको अवस्था नेगेटिभ नभएको बताएका छन् । विपक्षी र नेकपाकै नेताहरुले सरकारले केही गरेन भन्ने आरोप लगाइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न तथ्याङ्‍क प्रस्तुत गर्दै सरकारको उपलब्धि फेहरिस्त बताएका हुन्। उनले नेपाल कुनै पनि सूचकांकमा अगाडिबाट पछाडिमा झर्‍यो भन्ने अवस्थामा नपुगेको दाबी गरे।
विश्व बैंकको डुइङ बिजनेसदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको मानव विकास सूचकांकसम्म नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए। उनले यी सबै कुरा विधिको शासनको उपलब्धि भएको दाबी गरे। ‘केही टावर पड्काउने, ब्लास्ट गर्ने चन्दा असुली गर्नेहरुमाथि नियन्त्रण गरेका छौं,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म नेपालले उल्लेख्य सुधार गरेको बताए।
गणतन्त्रपछि लगातार ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भई त्यसपछि ६ प्रतिशतभन्दा भएको बताउँदै इकोनोमिस्टले उच्च आर्थिक वृद्धि गरिरहेका मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राखेको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे। ‘हामीले बनाएको होइन, द इकोनोमिस्टले हो।अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा नेपाल अगाडि बढेको छ। कम्युनिस्ट सरकाले कसैलाई पनि कमजोर बनाएको छैन,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषण सुरु भएको र फलाम खानी उत्पादनको काम निकट भविष्यमा सुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीओलीले दाबी गरे। यी दुई आयोजना पूरा भएपछि नेपालको अवस्था बेग्लै हुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। त्यसैगरी उनले निर्यात २७ प्रतिशतले बढेको, आयातमा कमी आएको, भुक्तानी सन्तुलन बचतमा रहेको, उत्पादन र उत्पादकत्व बढेको तथा, धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढेको तथ्यांक नै प्रस्तुत गरे।
सडक निर्माण, पुल निर्माणलगायत भौतिक पूर्वाधारमा भएका काम, पानी जहाज कार्यालयको स्थापना, चितवनको नारायणी नदीमा क्रुज सञ्चालन भएको लगायतका विवरण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरे।
ओलीले दुई घण्टा लामो सम्बोधन गरेर हिँडेलगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हंगामा
प्रधानमन्त्री तथा पहिलो वरियताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई घण्टा लामो सम्बोधन गरेर हिँडेलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हंगामा मच्चिएको छ । दुई अध्यक्षको फोटो राखिएकोदेखि अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लगायतका विषयलाई अलग एजेण्डा नराखिएकोमा २८ जना नेताले उठेर आपत्ति जनाएका हुन् ।
ओली हिँडेलगत्तै ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ प्रचण्डले बैठक अघि बढाउन खोज्दा केन्द्रीय सदस्यहरु उठेर कार्यसूची सच्याउन माग गरे । महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकका कार्यसूची सुनाउन थालेपछि भीम रावल,अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका नेताहरुले केही विषय अलग एजेण्डासहित छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
एमसीसीको विषय राजनीतिक प्रतिवेदनमा सामान्य रुपमा उल्लेख भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीमा यसलाई अलग्गै एजेण्डाका रुपमा छलफल हुनुपर्ने माग अधिकांश सदस्यको थियो । त्यस्तै पोलिटव्यूरो गठनको एजेण्डा पनि अलग्गै चाहिने भन्दै यही केन्द्रीय कमिटीबाट पोलिटव्यूरो गठन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले कालापानीमा सीमा अतिक्रमणको विषय पनि अलग्गै एजेण्डामा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । महिला नेताहरुले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको विषयलाई एजेण्डा बनाउन माग गरेका छन् । बैठक हलमा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको फोटो राखिएकोमा समेत नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठक अघि बढाउन लागेकै बेला केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले बैठक हलमा अध्यक्षद्वयको फोटो राखिनु राजतन्त्रको झल्को भन्दै अर्को बैठकमा हटाउन सुझाव दिए । ‘फोटो टाँग्ने निर्णय कसले गरेको हो ? आज हटाउन लाज हुन्छ भने अर्को बैठकमा हटाउनुस्, राजाहरुको जस्तो भयो यो त’ उनले भने ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा अध्यक्षको फोटो राख्ने निर्णय कुन कमिटीबाट भएको हो भन्दै कटाक्ष गरे । ओली हिँडिसकेकाले उनले प्रचण्डलाई ‘तपाईंलाई यो फोटो देखेर आनन्द लागेको छ ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।
खतिवडाले भने–पार्टी बैठकमा नेताको फोटो राख्ने निर्णय कुन कमिटीबाट कहिले भएको हो ? अध्यक्ष कमरेड तपाईलाई यो फोटो देखेर कार्यकर्ता खुसी भएका होलान् जस्तो लाग्छ ? तपाईहरुलाई आनन्द लागेको छ ?
नेकपा बैठक हलमा ९ जना सचिवालय सदस्य बस्ने मन्चको दाया केपी ओली र बायाँतिर प्रचण्डको फोटो राखिएको छ । ब्यानरमा भने नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल र तत्कालिन नेकपा एमालेका महासचिव मदनकुमार भण्डारीको तस्वीर राखिएको छ । यसअघि पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको फोटो सँगै राख्ने गरिएको थियो ।
नेकपा बैठकमा यसपटक मार्क्‍स , एंगेल्स, लेनिनसहितका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरुको तस्वीर हटाइएको छ । यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीका हरेक कार्यक्रममा मार्क्स लेनिनहरुको फोटो राख्ने गरिएको थियो । मनमोहन र मार्क्स, लेनिनको फोटो हटाइएकोमा पनि नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरुले अचम्म मानेका छन् ।
२९ जनाको १५ टोली
बुधवार शुरु भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिवको संगठनात्मक प्रतिवेदनमाथि बिहीबार छलफल हुने भएको छ । बिहीबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबस्ने तर प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए ।
जम्बो केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यले बोल्दा समय धेरै दिन लाग्ने भएकाले केन्द्रीय सदस्यहरुको समूह विभाजन गरेर समूह समूहमा छलफल गराइने भएको हो । महासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा १५ वटा समूह बनाउने र प्रत्येक समूहमा २९ केन्द्रीय सदस्य रहने प्रस्ताव गरेका थिए ।
समूहगत छलफलमा सचिवालवयका ९ जना नेता रहने छैनन् । १५ मध्ये ८ वटा समूहको छलफल सभागृहमा हुनेछ भने धुम्बाराही पार्टी कार्यालयमा चारवटा र पेरिसडाँडामा ३ वटा समूहको छलफल हुनेछ । हरेक समूहले आ आफ्नो टोली नेता चयन गर्ने र छलफलका निश्कर्ष शुक्रबारको बैठकमा टोली नेताले पेश गर्ने उनले बताए ।
वर्णानुक्रमअनुसार केन्द्रीय सदस्यहरुको टोली चयन भएको छ । नेकपा बैठकमा सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिको मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग समेत उठेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुले विभिन्न मन्त्रालयका नियुक्तिमा पार्टी भन्दा बाहिरका व्यक्तिले ठाउँ पाएको भन्दै मापदण्डका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति हुनुपर्ने माग उठेको हो ।
बैठकको शुरुमै केन्द्रीय सदस्यहरुले एजेण्डामा आपत्ति जनाएपछि प्रचण्डले सबैका एजेण्डा सम्बोधन हुने बताएका थिए । उनले एमसीसी,पोलिटव्यूरो, सीमा समस्या लगायतका विषय राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रतिवेदनमा परेको भन्दै सबै एजेण्डामा छलफल गराइने आश्वासन दिएपछि बैठक अघि बढेको थियो ।